ရဲနှင့်စစ်သုံးစက်ရုံ - တရုတ်ရဲနှင့်စစ်သုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
1. ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကို SR223 ရေဒါတွင်အဓိကအားဖြင့်ရေဒါခင်းကျင်းမှုတစ်ခု၊ ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ ၁ ခုနှင့် turntable များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုအကျဉ်းထောင်များ၊ ပြပွဲများနှင့်စစ်စခန်းများကဲ့သို့သောအဓိကနေရာများတွင်အသေးစား / အသေးစားအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအားထောက်လှမ်းခြင်း၊ သတိပေးခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ဖော်ပြခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ပစ်မှတ်၏တည်နေရာ၊ အကွာအဝေး၊ အမြင့်နှင့်အမြန်နှုန်းစသည့်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ 2. အဓိကထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းစနစ်အဆင့်ဆင့်စနစ်တပ်ဆင်ထားသောစနစ် (azimuth စက်စကင်နစ် + စပါးအဆင့် ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: LT-600 Desktop အန္တရာယ်ရှိသောအရည်ရှာဖွေစက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအရည်ရှာဖွေစက်အသစ်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းပညာသည်မြင့်မားသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်သည်မီးလောင်လွယ်သော၊ ပေါက်ကွဲ။ ထိတွေ့နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည့်အရည်များကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအန္တရာယ်ရှိသောအရည်များ (လောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော) များရှိအန္တရာယ်ကင်းသောအရည်များသို့လုံခြုံရေးareaရိယာသို့မဝင်နိုင်စေရန်ထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဘူတာရုံများ၊ မြေအောက်ရထားများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများ၊
၁။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် W38M ပေါက်ကွဲစေသောအဖျက်စွမ်းအားသည်အဓိကအားဖြင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်မသိသောထုပ်ပိုးမှုများအားဖြိုခွဲရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အထူးရဲများသည်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး EOD လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါ၎င်းသည်လုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ W38M သည်အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့၏လုံခြုံရေးကိုလည်းသေချာစေသည်။ W38M ပေါက်ကွဲနိုင်သောအနှောင့်အယှက်ကိုမသိသောပေါက်ကွဲနိုင်သောအခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံပြီးစိတ်ချရသောစွမ်းအားကိုဖျက်ဆီးသည်။ 2. သတ်မှတ်ချက်အရွယ်အစား： 500mm * 440mm * 400mm အလေးချိန်： 21kg Launcher length： 500mm Launcher diameter: ...
ပြောင်ပြောင်တောက်တောက်တုန်နေသောဒိုင်းလွှားသည် acousto-optic dispersing နှင့်ပေါင်းစပ်။ တောက်ပသောအလင်းရောင်နှင့်ပြန့်ကျဲမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသီးသီးထားပြီး command နှင့်လမ်းညွှန်ဝါဒဖြန့်ခြင်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ shield power switch ကိုဖွင့်ပါ။ voltage display မီတာသည်ပုံမှန်အားဖြင့် voltage (display 10 ~ 12V) ကိုပြသပါမည်။ ထို့နောက်သင်အားကြီးသောအလင်းဖြန့်ခြင်း၊ အသံလှိုင်းပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အော်ဟစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအသီးသီးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ နှစ်ခုပျံ့နှံ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသီးခြားစီသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသည် ...
TS-Micro သယ်ဆောင်ရလွယ်သောစပီကာစနစ် (LRAD အကွာအဝေးတူအသံစနစ်)
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်： သယ်ဆောင်ရလွယ်သောစပီကာသည်ထိတွေ့မှုနှင့်အန္တရာယ်မကင်းဘဲလူစုလူဝေးကိုလူစုခွဲရန်အသိဥာဏ်ရှိသောကာကွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်သည့်သတိပေးအသံများနှင့်အသံမက်ဆေ့ခ်ျများလိုအပ်သည့်မည်သည့်နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုမဆိုတွေ့ဆုံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကိရိယာသည်ပြင်းထန်သောဆူညံသံများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီးလူတို့အားကာကွယ်မှုမရှိဘဲပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေထိုင်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများကိုညှိနှိုင်းသောအခါမမြင်ရသောစွမ်းအင်မြင့်မားသောသံနံရံတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ER3 (M) EOD စက်ရုပ်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် EOD စက်ရုပ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ လူသားများရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောမြေအနေအထားကိုရှာဖွေရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၆ ဒီဂရီလွတ်လပ်ခွင့် EOD ကိုင်တွယ်သူသည်မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆိုလည်ပတ်နိုင်ပြီးကြီးမားသောအရာဝတ္ထုများကို 55KG အထိဖမ်းယူနိုင်သည်။ ကိုယ်ထည်သည် crawler + double swing arm ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စက်ရုပ်သည်ကြိုးထိန်းချုပ်မှုတပ်ဆင်ထားပြီးကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အောက်ရှိကြိုးများမှတဆင့်အဝေးမှလည်ပတ်နိုင်သည်။
ER3 (H) EOD စက်ရုပ်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် EOD စက်ရုပ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ လူသားများရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောမြေအနေအထားကိုရှာဖွေရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၆ ဒီဂရီလွတ်လပ်ခွင့် EOD ကိုင်တွယ်သူသည်မည်သည့်ထောင့်မှမဆိုလှည့်နိုင်ပြီး ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိကြီးမားသောအရာဝတ္ထုများကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ အဆိုပါကိုယ်ထည်အမျိုးမျိုးသောမြေပြင်အနေအထားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်အလျင်အမြန်စေလွှတ်ရန်နိုင်သည့် crawler ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ စက်ရုပ်တွင် fiber fiber automatic transmitter တပ်ဆင်ထားပြီး network interf ... \_ t
ER3 (S-1) EOD စက်ရုပ်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် EOD စက်ရုပ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ လူသားများရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောမြေအနေအထားကိုရှာဖွေရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၆ ဒီဂရီလွတ်လပ်ခွင့် EOD ကိုင်တွယ်သူသည်မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆိုလှည့်နိုင်ပြီး ၁၀.၅ ကီလိုဂရမ်အထိကြီးမားသောအရာဝတ္ထုများကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ ကိုယ်ထည်သည် crawler + double swing arm ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စက်ရုပ်သည် wired control တပ်ဆင်ထားပြီး network int အောက်ရှိ wired မှတစ်ဆင့်အဝေးမှလည်ပတ်နိုင်သည်။
သံလိုက်မဟုတ်သောကိရိယာအစုံသည်အဓိကအားဖြင့် beryllium bronze ကိုအသုံးပြုသည်။ အမျိုးသား IIC အဆင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၁% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝင်မှု ရှိ၍ ဓာတ်ငွေ့ကိုမပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါ။ beryllium bronze ပစ္စည်း၏သံလိုက်သည်သုညဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် beryllium bronze tool ကိုသံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းရှိ non-magnetic tool ဟုလည်းခေါ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကင်းစစ်ဆင်ရေး။ ဖောက်ခွဲရေးသမားများကအရာဝတ္ထုများကိုစွန့်ပစ်သောအခါ၊
Accessories နှင့်အတူ TFDY-03 စတိုင်ကျည်ကာအင်္ကျီ
မော်ဒယ်အမှတ်အရွယ်အစားကာကွယ်မှုAreaရိယာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) TFDY-03 S 0.28 0.2 NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 9mm & .44 Mag 9mm နှင့် .44 Mag 3.4 L 0.32 0.3 NIJ IIIA အတွက် 9.3 & 0.44㎡ NIJ IIIA အတွက် 9mm & .44 Mag 3.9 XL ၀.၃၄I NIJ IIIA 9mm & .44 Mag ၃.၇ XXL 0.37㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 3.9 3XL 0.39㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 4.0 4XL 0.42㎡ NIJ IIIA သည် 9m အတွက် ...
ပုံနှင့်အမှတ်အရွယ်အစားကာကွယ်မှုProtectionရိယာကာကွယ်မှုအဆင့်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) TFDY-2 S 0.26㎡ NIJ IIIA 9mm နှင့် .44 Mag 3.0 M 0.28㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 3.1 L 0.30㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 အတွက် ၉ မီလီမီတာနှင့် .44 မဂ် ၃.၂ Mag ၃.၂ XXL ၀.၃၄I NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 3.5 3XL 0.36㎡ NIJ IIIA အတွက် 9mm & .44 Mag 3.6 * ရှေ့နှင့်နောက်ဖက်တွင် MOLLE Webbing * ရှေ့၊ နောက်ဖုံးဖုံး နှင့်ဘေးထွက်ကာကွယ်မှု * ရှေ့ ...
မော်ဒယ်နံပါတ် ။ 9mm & .44 Mag 2.6 Mag 2.6 XL 0.32㎡ NIJ ၉mm နှင့် .44 မဂ္ဂါဝပ်အတွက်အရွယ်အစားကာကွယ်မှုAreaရိယာကာကွယ်မှုအဆင့်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) R002 S 0.26㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 2.4A 0.28㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 Mag အတွက် 9mm & .44 Mag 2.7 XXL 0.34㎡ NIJ IIIA 9mm & .44 Mag 2.8 3XL 0.36㎡ NIJ IIIA ...